ငှားရန် - Land Rent In South Dagon (ID-299)
Land for rent in South Dagon industrial zone. Land Area - 1 Acre (43560 sqft) Asking Price - 10 Lakh (Nego) Land Rent In South Dagon (ID-299) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန်ရှိ…...
Land for rent in South Dagon industrial zone. Land Area - 1 Acre (43560 sqft) Asking Price - 10 Lakh (Nego) Land Rent In South Dagon (ID-299) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန်ရှိ…
Property ID: S-1185918
ငှားရန် - Land For Rent and Sale In Thilawar (ID-309)
Land for rent and sale in Thilawar industrial zone, Than Lyin Township. Land area - 1.843 Acres. Land has 8400 sqft warehouse. 315 KVA transformer is already included. Rent Price - 80 Lakh (Nego) Sale Price - 9000 Lakhs (Nego) Land For Rent and Sale In Thilawar (ID-309) We can do negotiate on that Above…...
Land for rent and sale in Thilawar industrial zone, Than Lyin Township. Land area - 1.843 Acres. Land has 8400 sqft warehouse. 315 KVA transformer is already included. Rent Price - 80 Lakh (Nego) Sale Price - 9000 Lakhs (Nego) Land For Rent and Sale In Thilawar (ID-309) We can do negotiate on that Above…
Property ID: S-1185883
ငှားရန် - လှိုင်သာယာမြို့နယ် ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာရှိ…
Property ID: S-1157290
ငှားရန် - Code-7536 အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Property ID: S-1187308
ငှားရန် - ကမာရွတ် အင်းယားလမ်းသွယ်တွင်…
Property ID: S-1187294
Mobile : 01401294, 01556352, 09250139211, 0945696
Office no : 095051785, 095403148, 0973236717, 0931579968
ငှားရန် - အမှတ်၂လမ်းမပေါ်တွင်မြေကွက်ကျယ်အမြန်ငှားရန်
Property ID: S-1187265
ငှားရန် - ၇န်ကင်း အောင်ဇေယျလမ်းတွင် မြေကွက်ကျယ်ငှားရန်ရှိသည်။(30X70)Land…
Property ID: S-1187081
ငှားရန် - တောင်ဥက္ကလာ ပါရမီလမ်းတွင် မြေကွက်ကျယ်ငှားရန်ရှိသည်။(40X60)…
Property ID: S-1187062
ငှားရန် - Code-7469 ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တွင်…
Property ID: S-1186850
ငှားရန် - Code-7441 သန်လျင်မြို့နယ်တွင် ရေမီးစုံပါ…
Property ID: S-1186792
ငှားရန် - တောင်ဒဂုံ၊စက်မှုဇုံအနီးရှိငှားရန်ရှိသောမြေကွက်(Malihku…
တောင်ဒဂုံ ၊ စက်မှုဇုံအနီး ၊ မြသင်္ခလမ်း ၊ ၆၀x၆၀ ၊ မြေကွက် ၊ ထောင့်ကွက် ၊ 10 Lks Contacts us; 09-264009696 , 09-264009797 , 09-264009898 ...
တောင်ဒဂုံ ၊ စက်မှုဇုံအနီး ၊ မြသင်္ခလမ်း ၊ ၆၀x၆၀ ၊ မြေကွက် ၊ ထောင့်ကွက် ၊ 10 Lks Contacts us; 09-264009696 , 09-264009797 , 09-264009898
Property ID: S-1186563
ငှားရန် - Land for Rent In Shwe Lin Ban (ID-228)
Land for rent in Shwe Lin Ban industrial zone, Hlaing Tharyar Township. Land Area -3Acres Asking price for 1 acre - 25 Lakhs (Nego) Total asking price of land - 75 Lakhs (Nego) Land for Rent In Shwe Lin Ban (ID-228) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the…...
Land for rent in Shwe Lin Ban industrial zone, Hlaing Tharyar Township. Land Area -3Acres Asking price for 1 acre - 25 Lakhs (Nego) Total asking price of land - 75 Lakhs (Nego) Land for Rent In Shwe Lin Ban (ID-228) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the…
Property ID: S-1175979
ငှားရန် - Land to Let (ID-236)
Land to let in Shwe Pyi Thar Industrial Zone. Land area – 2.25 Acres with 500 KVA transformer. Monthly rent price - 50 Lakhs (Nego) Land to Let (ID-236) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. English Language: 09792444317 ငှားရန်ရှိသောမြေမှာ…...
Land to let in Shwe Pyi Thar Industrial Zone. Land area – 2.25 Acres with 500 KVA transformer. Monthly rent price - 50 Lakhs (Nego) Land to Let (ID-236) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. English Language: 09792444317 ငှားရန်ရှိသောမြေမှာ…
Property ID: S-1175764
ငှားရန် - Pin Shwe Nyaung Street (ပင်ရွှေညောင်လမ်း)
*Location – Pin Shwe Nyaung Street, Tamwe Township. *Price – Ask on Price *Property Type — Land *Area — 18000 sqft...
*Location – Pin Shwe Nyaung Street, Tamwe Township. *Price – Ask on Price *Property Type — Land *Area — 18000 sqft
Pin Shwe Nyaung Street (ပင်ရွှေညောင်လမ်း)
Property ID: S-1184365
ငှားရန် - ရှုခင်းသာလမ်းမပေါ် ( ၁၅၀ ပေ X ၂၀၀…
Listed 28 December 2018
Advertiser : Aung Ye Lin
Property ID: S-1185227
Asking Price : 110 သိန်း
Office no : 09953361822
Listed 27 December 2018
Property ID: S-1168432
Property ID: S-1168429
Property ID: S-1168267
ငှားရန် - ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးဘေး ၄၆ရပ်ကွက်…
(၆၀ ပေ X ၆၀ ပေ) မြောက်ဒဂုံ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးဘေး အိမ်အမှတ်(၆၆၂+၆၆၃) ဂရမ်မြေ၊ ရေပြီးပါပြီး PH-09770909691...
(၆၀ ပေ X ၆၀ ပေ) မြောက်ဒဂုံ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးဘေး အိမ်အမှတ်(၆၆၂+၆၆၃) ဂရမ်မြေ၊ ရေပြီးပါပြီး PH-09770909691
Advertiser : RE
Property ID: S-1178486
Office no : 09769599988,09770909691
ငှားရန် - ခြံငှားမည်(၄၀ ပေ X ၆၀ ပေ) ဦးဝိစာရလမ်း…
စီးပွားရေးလုပ်ရန် အကောင်းဆုံးနေရာ၊လူနေစီကားသောနေရာ မြောက်ဒဂုံ ၄၂ ရပ်ကွက်၊ခြံအမှတ်၁၁၉၆၊ ဦးဝီစာရလမ်းမကြီးဘေး…...
စီးပွားရေးလုပ်ရန် အကောင်းဆုံးနေရာ၊လူနေစီကားသောနေရာ မြောက်ဒဂုံ ၄၂ ရပ်ကွက်၊ခြံအမှတ်၁၁၉၆၊ ဦးဝီစာရလမ်းမကြီးဘေး…
Property ID: S-1183357
မြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန် ခြံ၊ မြေကွက်များငှားရန် Real Estateငှားရန် Property များ
မြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန် ခြံ၊ မြေကွက်များဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ခြံ၊ မြေကွက်များပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ခြံ၊ မြေကွက်များကချင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ
ကရင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ခြံ၊ မြေကွက်များကယားပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ခြံ၊ မြေကွက်များမကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ခြံ၊ မြေကွက်များမွန်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ
ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ခြံ၊ မြေကွက်များရှမ်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ခြံ၊ မြေကွက်များတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ခြံ၊ မြေကွက်များရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ
ချင်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ခြံ၊ မြေကွက်များမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ခြံ၊ မြေကွက်များစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ခြံ၊ မြေကွက်များနေပြည်တော် ရှိ ငှားရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ
မြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များကချင်ပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များကယားပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များမွန်ပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ
ချင်းပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များနေပြည်တော်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ
မြန်မာပြည် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများမြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများ
မြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများမြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ
မြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန်များမြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ
မြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များမြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ